Kubizwe umhlangano wekhokhasi ye-ANC ePhalamende | News24
LAST UPDATED: 2018-11-19, 15:12
Kubizwe umhlangano wekhokhasi ye-ANC ePhalamende
Cape Town - Ikhokhasi ye-ANC ePhalameende izobamba umhlangano oyisipesheli ngoLwesine, kusho umbiko.
Le khokhasi ibizelwe emhlanganweni ngo-10:00 kulandela izigigaba eziningi ezenzeke ePhalamende kamuva, okubalwa ukuhlehliswa kwenkulumo ebhekiswe esizweni, kusho okhulumela i-ANC kuzwelonke uNonceba Mhlauli.
Nokho okuzodingidwa kulo mhlangano ngeke kudalulwe ngoba kubandakanya amalungu ekhokhasi kuphela, kusho uMhlauli.
Akujwayelekile ukuthi kuhlangane amakhokhasi ngaphambi kwe-SONA, ethathwa "njengokuvulwa kwePhalamende".
Imibiko iveza ukuthi amalungu e-ANC ePhalamende azodingida izindlela angasingatha ngayo izinto ngaphambi kwesimemezelo esibhekwe ngabomvu sikaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa malunga nekusasa likaMengameli Jacob Zuma.
OLUNYE UDABA: UZuma utshelwe ukuthi uma engazehleli ngokwakhe uzoxoshwa - Umbiko
Lesi simemezelo sizoyithinta ikhokhasi uma uZuma esula esikhundleni noma eketulwa. IPhalamende kuzomele lihlale ngokushesha ukuketula uZuma uma engazisuleli ngokwakhe.
Umengameli omusha kuzodingeka ukuthi aqokwe zingakapheli izinsuku ezingu-30 uma kwenzeka noma yikuphi phakathi kwalokhu okubili.
UNobhala Jikelele we-ANC u-Ace Magashule ubonakale noSotswebhu we-ANC uJackson Mthembu emagcekeni ePhalamende ngoLwesine.
UMthembu unqabile ukuphawula ngalo mhlangano.
"Lo wumhlangano wangasese wekhokhasi ye-ANC. Musani ukuthatha amashansi," kusho uMthembu etshela izintatheli.
LIVE: Gordhan says he advised Zuma to 'follow proper procurement process' regarding nuclear deal #StateCaptureInquiry
Bellville 14:28 PM
Bellville 14:07 PM